Stephan El Shaarawy Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Talyaaniga Stephan El Shaarawy Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada Full of Genius kubada cagta oo ugu wanaagsan ee loo yaqaan Nickname; "Pharaone". Dabagalka El Shaarawy ee Carruurta iyo sheeko xariifin aan sax aheyn Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo aan run ahayn oo la yaqaan ee isaga ku saabsan.
Haa, qof walba wuu ogyahay xajmiga, qallafsanaanta iyo dhaqdhaqaaqa, laakiin qaar ka mid ah waxay tixgeliyaan Stephan El Shaarawy's Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Hore
Stephan Kareem el-Shaarawy wuxuu ku dhashay maalintii 27th ee Oktoobar 1992, oo ku yaala Savona, Italy. Waxa uu ku dhashay hooyadiis Talyaaniga, Lucy El Shaarawy iyo aabaha Masaarihii Sabri El Shaarawy, kuwaas oo sababay xaalado dhaqaale oo adag oo ka yimid Masar waxayna u guureen Italy si ay u bilaabaan qoyskiisa. Hoos waxaa ku yaal sawirka labada waalid.
sida Edin Dzeko, Stephan waxaa loo caleemo saaray Muslimiin, waxaana uu ku soo koray walalkiisa koowaad Manuel Shaarawy kaasoo udhow inuu noqdo wakiilkiisa iyo taageere weyn oo kubada cagta ah.
Sheekada carruurnimada waa mid xiiso leh, haddii aan caadi ahayn - waxaa ku saabsan wiil yar oo cute ah oo naftiisa helay isagoo ku barakeeyey tayo sarre oo aan caadi ahayn. Xaqiiqdii, isagu ku riyooday kubada cagta tan iyo markii uu caruurnimadiisii ​​yaraa. Ilmo ahaan, Stephan waxaa loo isticmaalay in uu ciyaaro isboorti dhowr ah, laakiin wuxuu kudhowyahay kubada cagta. Markuu ahaa shan ama lix sano, waalidkiis ayaa u ogolaaday inuu ku biiro Legino, koox ku taal Savona. Stephan ilaa halkaas wuxuu ahaa 11.
Inkastoo uu diirada saarayo inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah, Stephan weli waxa uu ku guuleystay inuu waxbarto isaga hooyadiis. Wuxuu ahaa heer sare ee fasalkiisa. Waalidiintiisa ayaa isku raacay in wiilkoodu uu dhammeeyo dugsiga ka hor inta uusan diiwaangelin kooxdiisii ​​ugu horeysay ee sida ku cad ID-ka hoose.
Sababtoo ah macalimiin, El Shaarawy ayaa noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee kubada cagta oo dhan. Wuxuu bilaabay mustaqbalkiisa dhalashadiisa Genoa wax yar ka dib da'da 14-jir. Inkastoo uu soo laabanayo, Stephan wuxuu ku biiray kooxdii ugu horeysay xilli ciyaareedka, taas oo ka caawisay inuu koro dareen kasta oo ciyaaraha ah. Iyadoo daawashada sawirada Kaka uu yahay qaabkiisa, Stephan wuxuu helay boodhadh kaas oo horseeday horumar joogto ah.
Ninkan ayaa sidoo kale ku darsaday isaga iyo saaxiibadiisa kubbadda cagta inay fasax ka qaataan gadaashiisa yar ee gurigeeda ka dib markii ay maqashay buuq ay sababi karto.
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Kacsanaanta Fikradda
Stephan qudhiisu wuu is aamiyay wuxuuna muujiyay ballanqaadkiisa iyo go'aankiisa wax kasta oo uu sameeyay.
Ilaa intii kubada cagta laga walwalsanaa, waxa ay aheyd wax badan oo ku saabsan waxa uu ku sameeyay madaxiisa intii uu lugta ku jiray. Stephan waxa uu ahaa mid aad u hooseeya iyada oo loo marayo xaaladaha guusha iyo luminta. Waxa loo adeegsan jiray talo-siin kala soocaya asxaabteyda iyo qoyskiisa meelo uu hagaajin karo. 21 December 2008, markii uu ahaa sanadka 16, waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee kooxda isagoo noqday ciyaaryahankii sideedaad ee ugu da'da yaraa taariikhda Serie A si uu u ciyaaro kulankiisii ​​ugu horeeyay ee horyaalka Talyaaniga.
Si kastaba ha ahaatee, xirfaddiisa ayaa ka soo baxday maaddaama taxane iololeyaal isdifaacay oo xayiray 2013 ilaa 2015. Tani waxay dhacday ka dib markii qalliin lagu guuleystey lugta midig ee ku guul daraysatay inay si waxtar leh u bogsato. Ka dib maqnaansho dheer oo uu ku maqnaa dhaawacyo kale, kooxdiisa, Milan ayaa go'aansatay inay u soo bandhigto Monaco xilli ciyaareed amaah ah oo ay ku iibsadaan.
Inkastoo uu amaah ku joogay, Monaco ayaa ku ciyaareysay qalad, kiiskuna wuxuu noqday mid xun. Xilligaas oo kale xilli ciyaareed amaah ah, Stephan ayaa ka mid noqday ciyaartoyda markii uu joogay 1 kulan yar oo ka mid ah Monaco oo ku biiray waajibaadka shuruudda ah inuu iibsado. Nasiib darro, waxaa loo soo celiyay Milan oo si dhaqso ah amaah ah ugu dhiibay Roma sababtoo ah heshiiskii amaahda ahaa mid aad u wanaagsan oo joogto ah. Mucjiso ayaa timid markii Stephan uu dhaliyayAborpion goolka gadaashiisa (Video Below) Roma oo qandaraaska u cusbooneysiiyay. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Xiriirka
Warbixin ayaa waxa ay ku sheegtay in Stephan uu bilaabay inuu xiriirkiisa ku dhexmaro garoonka uu ku ciyaaro caruurnimadiisa, Ester Giordano. Xiriirintooda waxay ka qaadeen inay ka helaan duruufaha ugu fiican ee jacaylka dhabta ah. Stephan wuxuu mar uun soo xasuustay mid ka mid ah xusuusta carruurnimada ugu horreysa ee u muujiyay jacaylka Ester iyo inuu aaminsan yahay inay is qabi karaan hal maalin.
Ka sokow xirfaddiisa xirfadeed, Stephan El-Shaarawy waxaa loo yaqaanaa inuu ku raaxaysto noloshiisa saaxiibkiisa, Ester Giordano kaasoo uu si aad ah uula kulmay.
Looma guursadeen waqtigii wax la qoro, mana lahaan wax carruur ah oo nool ama nafley ah. Dhammaan waxay sameeyaan ayaa maalin kasta la jecel yahay oo waxay ku qaataan waqti fiican tayada badda.
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Xaqiiqooyinka Qofka
Stephan El Sharawy wuxuu leeyahay sifooyin badan oo shaqsiyan ah. Bilaabidda, waxaan soo bandhignaa qiimeynta Lifebogger sawirrada hoose.
Saxanka uu jecel yahay: Trofie al pesto - nooc saxan ah Genovese iyo bariis la shiilay oo bariis ah.
Awoodiisa: Waa wada shaqeyn, diblomaasi, raaxo leh, caqli-gal ah, bulsho.
Isaga oo Tabar-darrada: Wuxuu noqon karaa mid aan habsami lahayn, isaga oo ka hortagaya iskahorimaadka, wuxuu qaadi doonaa jaahwareer iyo niyad jab.
Maxaa isaga jecel yahay: Wuxuu jecel yahay Flyboarding (sida lagu arkay muuqaalka hoos ku qoran), isagoo ahmiyad leh, isagoo haysta rituals, macaamilka, la wadaagista dadka kale iyo inuu ku raaxaysto dibadda (mar kale sida hoos ku aragtay).
Waxa uu necebyahay: Marwalba, Stephan wuxuu niyadjabaa rabshadaha, caddaalad darrada, qulqul-darrada, u hoggaansamida.
Soo koobid, Stephan waa nabad, caddaalad, iyo nacayb kali ah. Iskaashiga isaga ayaa aad muhiim u ah. Sida laga soo xigtay Stephan, waxa kaliya ee muhiimka u ah isaga waa asalkiisa gaarka ah ee gaarka ah iyo jacaylka Ester. Waa qof diyaar u ah inuu wax walba sameeyo si looga fogaado isku dhacii, isaga oo nabaddiisa ilaalinaya markasta oo suurtagal ah.
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xaqiiqooyinka looyaqaan -Nolosha Qoyska
Stephan waxa uu ka yimid asal ahaan heerka dhexe ee qoyskiisa markii uu aabihiis, Sabri El Shaarawy u shaqeynayey. Labada waalid ee sawirka hoos ku qoran waxay bilaabeen inay caruurtooda ku qaataan xilligii xiga ee 30.
Waa arrin ku habboon in la ogaado in ilmo yar, Stephan hooyadiis Lucia Shaarawy ay ka badan tahay taageerada wiilkeeda oo sii waday waxbarashadiisa halka aabbihiis uu doonayay isku darka labadaba waxbarashada iyo kubada cagta.
Walaal: Stephan wuxuu leeyahay walaalkiis oo magaciisu yahay Manuel El Shaarawy. Halkii uu ku tiirsan lahaa hantida weyn ee walaalkiis, Manuel sawir hoose ayaa tagay si uu u noqdo wakiil kubada cagta ah.
Dhamaan mahadnaqa hooyadiis Lucia. In ka yar sanado 25, Manuel Shaarawy wuxuu noqday shahaadada masters ee Suuqyada iyo Istaraatijiyada Ganacsiga ee Farsamada Dhaqaalaha ee Jaamacadda Katooliga ee Sacuud Heart, Milan Talyaaniga. Khibrada tacliinta hadda waxay ku biireysaa xirfaddiisa xirfadeed ee maareynta walaalka walaalkiis.
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Timihiisa
Mar uun, Taageeraha Stephan ee Aldo ayaa sheegay in ..."Wiilkayga lix-jirka ah wuxuu rabaa timo sida adiga. Maxay tahay inuu sameeyo? "
"Waxaa jira hal shay oo keliya oo la sameeyo, taas ayaana ah inaan u kaxeeyo timo-qabadeyga! Waxaan heystaa seddex qof oo ka mid ah - mid ka mid ah Savona, mid ka mid ah Milan iyo hal halkan oo Rome ah. "
Wiilka Aldo ayaa ku dhammaaday isagoo leh timo Stephan's sida muuqata hoos.
Intee in le'eg ayay kugu qaadataa inaad timo timahaaga subaxa? Maxaad isticmaashaa?
Jawaabta Stephan ..."Ma ahan waqti dheer. Waxay ubaahan tahay wax kasta oo ay qabanayaan maalmahan. Xitaa xitaa kuma shanlaynin. Waxaan kaliya ku siinayaa dharbaaxo timo jareer leh, isticmaal wax yar oo ah wax - maaha jel - iyo qaar ka mid ah timaha si ay u qabtaan meelna waa taas. "
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Idol
Sida laga soo xigtay Stephan El Shaarawy ... "Waxaan mar walba daawaday Kaka markii aan yaraa - markii uu joogay AC Milan. Waxa uu ahaa qaab ciyaareedkeyga xili ah, labadaba iyo banaanka garoonka dhexdiisa. Wuxuu had iyo jeer u yimid sida run ahaantii hoos u-dhulka, xitaa ka hor inta aan isaga la kulmay. Kadib waxaan ogaaday in aan mar uun ogaano markii aan la ciyaarnay Real Madrid kulan saaxiibtinimo oo America ah, waxaana uu ahaa sida aan u maleynayay - qof cajiib ah oo aan aheyn ciyaaryahan kubad fantastik ah. "
Stephan El Shaarawy Sheeko dhalasho sheeko dheereeya Xogta loo yaqaan 'Iska diiday dhulkiisa
Marka hore, Stephan wuxuu uqalmay inuu u ciyaaro kooxda Masar waa xulka qaranka kubadda cagta, laakiin loo diiday kadibna tababar Xasan Shehata kuwaas oo jaahil ah sttaas oo ah "Ma aha mid kasta Masaarida oo u ciyaara horyaalka shisheeye ayaa uqalma inuu u ciyaaro xulka qaranka ".
Nasiib darro, El Shaarawy ayaa markaas bilaabay inuu la ciyaaro Italy U-17 halkaasoo uu ka qeyb qaatay in labadaba 2009 UEFA U-17 Euro iyo 2009 FIFA U-17 Koobka Adduunka.
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta our Storyhan El Sharawy Carrihood Story plus iyo xaqiiqooyinka Lahaanshada. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Julia Nofembar 19, 2018 XXX: 4 pm
Muy bueno ama datos, waa in aad ka mid noqotaa. Sobre su nooli, waa in aad ka mid noqotaa ama aadan ku qanacsaneyn.
Jorginho Carruurti Sheeko Xogta Wanaagsan ee Xogta Lahaanshaha
Davide Zappacosta Sheeko Xeelad Weyn Xaqiiqo Weyn
Marco Verratti Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta